ဇွန် 2014 |5၏စာမျက်နှာ 46 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 5)
InfoComm 2014 ထံမှ RPVisuals တဲခရီးစဉ်
စတိဗ် Greenblatt #InfoComm 2014 #AVTweeps http://t.co/k6TUfzmNsa စဉ်အတွင်း RPVisuals တဲ tours
InfoComm 2014 မှာ MultiTaction
ဂျော့ခ်ျ Tucker ကျွန်တော်တို့ကို @MultiTaction #AVTweeps http://t.co/G4v8Jrz88J ကနေတကယ်မတရားသောသူသည်ထိ Display ကိုပြသ
NEC သမ္မတ InfoComm 2014 အပေါ် Us ခုနှစ်တွင်ဝမျးမွော
အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် - NEC သမျှသောအပေါ်ပိုထိ NEC AV စနစ်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်းမယ့်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ Pierre ၏ဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။
Infocomm 2014 ဧည့်ဘလော့ဂါ
Bryan Hellard အဆိုပါ InfoComm 2014 ပြပွဲထံမှသူ၏အကြံအစည်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှပေးသည်။ TPO ရဲ့ InfoComm ထုပ်ပိုးပြီး-Up နှင့်ဆုများအတွက်မကြာမီပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
InfoComm 2014 ကနေလေး key ကို AV စနစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ဤတွင် Las Vegas မှာဇွန်လ 14-20 အတွက်ယခုနှစ် InfoComm conference မှာထွက်ရပ်အသံ-အမြင်အာရုံနည်းပညာလေး key ကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့် Aereo Down ထိုးနှက်အဆိုပါ သာ. ကောင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့
အဘယ်ကြောင့် Aereo Down ထိုးနှက်အဆိုပါ သာ. ကောင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ ... Aereo မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များနှင့် ABC ရုပ်သံနဲ့တူအဓိကကွန်ယက်ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဒေသခံ affiliates မှဝင်ရောက်ခွင့်များကိုထုတ်လွှင့်တီဗီထုတ်လွှင့်။
တရားရုံးချုပ်: High-Tech မှ Aereo တကယ်ပဲရုံတစ် Cable ကို Knockoff Is
တရားရုံးချုပ်: High-Tech မှ Aereo တကယ်ပဲရုံတစ် Cable ကို Knockoff ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်တိုးတက်မှုအပေါငျးတို့သနေသော်လည်းတရားရုံး Aereo re-ထုတ်လွှင်အခမဲ့ခွငျးအားဖွငျ့အထဲကစတင်ခဲ့ရာ "လူအပေါင်းတို့သည်လက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်များရိုးရာ cable ကိုစနစ်, များအတွက်" ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် (ချီကာဂို, ယူအက်စ်)
ချီကာဂိုမှာတည်ရှိပါတယ်အား NBC နှင့်အတူထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာယောဘ, ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာအသစ်များ၏ US.and လျှောက်လွှာ။ * join ဖြစ်ရမည် # အရည်အချင်းများ / လိုအပ်ချက်များ ...
5 ၏စာမျက်နှာ 46«ပထမဦးစွာ...«34567 » 102030...နောက်ဆုံး»